Gloria Guevara in lagu badalo Julia Simpson, iyada oo ah WTTC President & CEO
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » Gloria Guevara in lagu badalo Julia Simpson, iyada oo ah WTTC President & CEO
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • LGBTQ • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Kooxda Duulimaadyada Caalamiga ah (IAG) Xubinta Guddiga Fulinta, Julia Simpson waxay magacawday Madaxweynaha & Agaasimaha Guud ee WTTC
WTTC waxay ku dhawaaqeysaa magacaabista Xubinta Gudiga Fulinta ee Diyaaradaha Caalamiga ah (IAG), Julia Simpson, inay tahay Madaxweyaheeda & Agaasimaheeda, laga bilaabo Ogosto 15.
WTTC waxay ku dhawaaqeysaa isbedelada hogaaminta ee ku dhawaaqida maareeye cusub oo hogaamiya golaha safarka iyo dalxiiska aduunka
Gloria Guevara ayaa ka tagtay afar sano kadib iyada oo hogaamineysay waaxda dalxiiska adduunka
Julia Simpson si ay ula wareegto xilka cusub ee Madaxweynaha & Agaasimaha Guud ee WTTC
The Golaha Socdaalka & Dalxiiska Adduunka (WTTC) ayaa ku dhawaaqday bixitaanka Gloria Guevara ka dib afar sano oo ay hogaamineysay ururka dalxiiska adduunka oo badanaa loo arko inay matalayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay ee safarka iyo dalxiiska.
Xoghayihii hore ee Dalxiiska ee Mexico, Guevara, wuxuu ku biiray WTTC bishii Ogosto 2017, wuxuu WTTC iyo xubnaheeda ku hogaamiyay ajande isbadal ah sanadihii la soo dhaafay, oo ay ku jiraan saameynta weyn ee waaxda ee COVID-19. Guevara wuxuu ahaa codkii xooganaa ee hogaaminayay waaxda socdaalka & Dalxiiska aduunka ilaa sanadkii ugu adkaa taariikhda wuxuuna gacan ka gaystay mideynta waaxda iyo qeexida wadada soo kabashada.
WTTC waxay tiri: Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno magacaabista Xubinta Guddiga Fulinta Caalamiga ee Diyaaradaha (IAG), Julia Simpson, inay noqoto Madaxweynaha iyo Madaxa Guud, laga bilaabo Ogosto 15.
Gloria Guevara ayaa u sheegtay eTurboNews:
Julia waxay khibrad weyn u leedahay shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ah
Iyadu waa hoggaamiye adag oo WTTC gaarsiin doona heerka xiga
Simpson wuxuu keenaa khibrad ballaaran oo ku saabsan safarka & Dalxiiska, isagoo kasoo shaqeeyay guddiyada British Airways, Iberia iyo markii ugu dambeysay isagoo ahaa Madaxa Shaqaalaha ee Shirkadda Caalamiga ee Diyaaradaha. Waxay horey uga soo shaqeysay heerar sare oo ka tirsan Dowlada UK oo ay ka mid tahay la taliyaha Raiisul Wasaaraha UK.
Juergen Steinmetz, Guddoomiyaha Shabakada Dalxiiska Adduunka (WTN) ugu hambalyeeyay Julia Simpson qoraalkeeda cusub. WTN waxay rajeyneysaa inay sii wado la shaqeynta WTTC ee ku wajahan mideynta mustaqbalka dalxiiska. WTN waxay u rajeyneysaa Gloria dhammaan wanaagga shaqadeeda mustaqbalka waxayna ugu mahadcelisay jawaab celinteeda, furfurnaanta, iyo saaxiibtinimada sanadihii la soo dhaafay.
Gloria waxay ku guuleysatay inay mideyso waaxda, waxay awood u yeelatay inay qeexdo wadada soo kabashada, dhameystirto bayaanka G20, waxayna ka baxday dhacdadii ugu horeysay ee dalxiiska adduunka, WTTC Summit ee ka dhacday Cancun, Mexico bishii hore. ”
Madaxweynaha Carnival Corporation iyo Agaasimaha Guud, Arnold Donald, oo dhowaan loo magacaabay Guddoomiyaha WTTC, ayaa ammaanay Gloria Guevara oo ku soo dhoweeyey Julia Simpson doorkeeda cusub.
Donald ayaa yiri: “Waxaan jeclaan lahaa inaan marka hore u mahadceliyo Gloria dadaalka ay muujisay iyo sida ay ugu heelan tahay WTTC, gaar ahaan waqtiyadan adag. Wax-ku-darsigeedu wuxuu ahaa mid aan la qiyaasi karin, ka caawinta midaynta waaxda maareynta iyo ka-soo-kabashada aafada, ilaa bixinta cod cad iyo jiheyn loogu talagalay dib-u-ambaqaadka safarka caalamiga ah. Aniga iyo dhamaan guddiga fulinta waxaan ku faraxsanahay caawinaada joogtada ah ee Gloria iyada oo loo marayo kala guurka iyo taageeradeeda WTTC.
Waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhoweeyo Julia Simpson, oo ah hogaamiye khaas ah oo khibrad u leh shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo dowlada, si ay gacan uga geysato hagitaanka WTTC marxaladan adag ee socdaalka & Dalxiiska. Waxaan rajeynayaa inaan la shaqeeyo Julia doorkeyga Guddoomiye, si aan u sii wado dhismaha waxqabadyada guulaha badan ee WTTC. ”
Gloria Guevara ayaa tiri: “Waa aniga oo qalbi culus aan uga tagayo WTTC. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan hogaamiyay kooxdan kaladuwanaanta iyo hibada leh isla markaana aan la shaqeeyay hogaamiyeyaal badan oo warshado cajaa’ib leh, kuwaas oo ah Xubnaha WTTC, oo aan xiriir adag la yeeshay madaxda dawlada ee dalxiiska adduunka.
Waxaan ka tagayaa WTTC ka dib markaan dhammeeyo waajibaadkeyga, anigoo ku jira boos adag sida codka waaxda gaarka loo leeyahay iyo hogaamiyaha ajandaha adduunka. Waan ogahay in hoogaanka adag ee Julia, WTTC ay sii wadi doonto inay ku sii dhisto dhaxalkan oo ay u horseedo cutubkeeda xiga, iyadoo u ololeyn doonta dhamaan waaxda socdaalka & dalxiiska ee soo kabashadeeda ”.
Julia Simpson ayaa tiri “Waxay noqon doontaa mudnaan weyn in la hogaamiyo WTTC maadaama ay ka soo baxday dhibaatadii ugu xumeyd ee soo marta taariikhdeena. Safarka & Dalxiisku waxay door muhiim ah ka ciyaaraan dhaqaalaheena adduunka oo dhan, waxayna xisaabiyeen 330m shaqooyin sanadka 2019. Bulshooyin badan ayaa laf dhabar u ah ganacsiyada qoysaska maamula ee burburay.
“Qeybta Safarka & Dalxiiska waxay muujisay hoggaan dhab ah 'dib-u-furidda' adduunka si nabad ah oo aamin ah; waxaanan rajaynayaa qaabaynta iyo wadista ajendaha himilada leh ee waaxda si loo gaadho koboc waara oo waara oo loo wada dhan yahay. ”